IWOOT တွင် LEGO ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှုအစုအဝေးအတွက် ကြီးမားသော စုဆောင်းငွေ
24 / 11 / 2021 24 / 11 / 2021 Chris Wharfe 175 Views စာ0မှတ်ချက် 10280 ပန်းပန်းစည်း, 10281 Bonsai သစ်ပင်, 31058 တန်ခိုးကြီးသောဒိုင်နိုဆော, 75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2021, ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator Expert, IWOOT ဖြစ်သည်, Lego, Lego ရုက္ခဗေဒစုဆောင်းမှု, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator Expert, lego အပေးအယူ, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Star Wars, Star Wars, အဆိုပါ LEGO Group
IWOOT ဖြစ်သည် Bonsai Tree နှင့် Flower Bouquet တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ ယခုနှစ် LEGO Botanical Collection set နှစ်ခုအတွက် အထင်ကြီးလောက်စရာ သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငွေချွေတာသော ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခု.
အပင်အခြေခံတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုသည် တစ်လုံးလျှင် £44.99 သို့မဟုတ် £89.98 ဖြင့် လက်လီရောင်းချလေ့ရှိသည် – သို့သော် နိုဝင်ဘာ 30 ရက်နေ့အထိ၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးလုံးကို မှာယူနိုင်ပါသည်။ IWOOT ဖြစ်သည် £68.99 ပဲရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် £20.99 သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ စျေးနှုန်းအပြည့်အစုံတွင် 23% ကျော်သာ သက်သာသည်။ ပိုကောင်းတာက သင့် c မှာ sets နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ အခမဲ့ ပေးပို့မှုအတွက်လည်း အရည်အချင်းပြည့်မီပါလိမ့်မယ်။art.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ IWOOT သို့သွားကာ ပန်းစည်း 10280 နှင့် 10281 Bonsai Tree ကို ကောက်ယူပါ။ ဤအစုအဝေးသည် Black Friday မတိုင်မီ ဝဘ်တစ်ဝိုက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့် သဘောတူညီချက်များစွာထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်- ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ၎င်းတို့အားလုံးကို လက်လီရောင်းချသူ၊ အပြင်အဆင်နှင့် ဒေသအလိုက် စီထားခြင်း။
ယနေ့ LEGO ပရိသတ်များအတွက် IWOOT ၏တစ်ခုတည်းသောသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါ၊ အွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူကလည်းကမ်းလှမ်းသည် £ 20 နှစ်ခုအစုံ2Mandalorian Battle Pack၊ 20 Mighty Dinosaurs နှင့် 75267 Grey Baseplate အပါအဝင် ရွေးချယ်ထားသော ထုတ်ကုန်များတွင် ကုဒ် 31058LEGO10701 ကို အသုံးပြုသောအခါ (သင်၌ အောက်ခြေပြားများ အများအပြား ရှိသည်)။
ဤနေရာတွင်ခေါင်း ထိုကမ်းလှမ်းချက်ပါရှိသည့် အစုံအလင်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် မမေ့ပါနှင့် Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ တစ်နှစ်တာ၏အကြီးမားဆုံးစျေးဝယ်ပွဲတစ်လျှောက်အပေးအယူများအားလုံးအတွက်စာမျက်နှာများ။
ကြောင်းအလုပ်ထောက်ပံ့စဉ်းစားပါ Brick Fanatics ကနေသင့်ရဲ့ Lego ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ပါဘူး IWOOT ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုအသုံးပြု။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← ဤ Black Friday တွင် Blocks မဂ္ဂဇင်းစာရင်းသွင်းမှုများတွင် 10% သက်သာသည်။
ကြည့်ပါ။ Lego Star Wars 75313 AT-AT – မင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေတယ်။ →